प्रवेश-पत्र प्रिन्ट गर्ने र त्यसमा फोटो टाँस गर्ने बारेको सूचना
यस आयोगको अध्यापन अनुमतिपत्रको परीक्षामा आवेदन भरेका उम्मेदवारहरुले प्रवेशपत्र लिने सम्बन्धमा निम्नानुसारको सूचना प्रकाशित गरिएको छ । योग्य उम्मेदवारहरुले सो अनुसार प्रवेश-पत्र प्राप्त गरी परीक्षामा सहभागी हुनु हुनेछ ।
आयोगको वेवसाइट (www.tsc.gov.np) को दायाँ पट्टि हरियो रंगमा रहेको Online Application मा गई 'प्रवेश-पत्र' लेखिएको बटनमा क्लिक गरेर खाली कोठामा आफ्नो भौचरमा रहेको एप्लिकेशन आइ.डी. र मोबाइल नं. Entry गरी Preview गर्ने । यो प्रवेश-पत्र तपाईले भरेको विवरणका आधारमा तयार भएको पाउनु हुनेछ ।
प्रवेश-पत्रको विवरण ठिक देखिएमा माथिको विवरण ठीक छ भन्ने बटनमा √ गरेपछि मात्र प्रवेश-पत्र Print गर्न सकिनेछ । प्रवेश-पत्र Print भएपछि विवरण सच्याउन सकिने छैन ।
आफ्नो प्रवेश-पत्रको छपाई सफा र प्रष्ट बुझिने सुनिश्चित गर्नु हुनेछ । प्रवेश-पत्र नबुझिने वा अष्पष्ट भएमा परीक्षामा सहभागी हुन कठिनाई पर्न सक्ने तर्फ सचेत रहनु होला ।
विवरण ठिक छ भन्ने यकिन भएपछि प्रवेश-पत्रलाई Portrait ढाँचाको A4 पेपर साइजमा Print गर्नु हुनेछ ।
प्रवेश-पत्रको निर्दिष्ट स्थानमा अनलाइन फाराम भर्दा Upload गरिएको अटो साइजको सक्कल फोटो नै टाँस गरेर निर्दिष्ट स्थानमा परीक्षार्थीले अनिवार्य रुपमा दस्तखत गर्नु पर्नेछ ।
रोल नम्बर नभएको प्रवेश-पत्रबाट परीक्षा दिन पाइने छैन ।
आयोगद्वारा पूर्व प्रकाशित विज्ञापनको योग्यता र शर्त विपरित परीक्षा दिएको पाइएमा सो परीक्षा जुनसुकै बखत रद्द हुन सक्नेछ ।
कृपया browser refresh गर्नु होला l (Ctrl+Shift+R)
अध्यापन अनुमतिपत्रको दरखास्त फाराम
Application ID र कारोबार संकेत न मिलाएर राख्नुहोला पछी सुधार्न पाउनु हुने छैन l
Confirm Application ID
कारोबार संकेत न
Confirm कारोबार संकेत न
( प्रवेश पत्र )
एप्लीकेसन आइ.डी.(Application ID)
नमुना प्रवेश पत्र
विवरण ठिक छ l
पुनश्च : यो प्रवेश पत्र तपाईंले भरेको फाराम विवरण अनुसार तयार भएको छ ।
परीक्षार्थीले परीक्षामा पालना गर्नुपर्ने नियमहरु
परीक्षार्थी परीक्षा दिन आउँदा अनिवार्य रुपमा प्रवेश पत्र ल्याउनु पर्नेछ । प्रवेश पत्र बिना परीक्षामा बस्न पाइने छैन ।
परीक्षा हलमा मोबाइल फोन, वैज्ञानिक क्यालकुलेटर, किताब, कापी, कागज, चिट आदि ल्याउन पाइने छैन । परीक्षार्थीले आपसमा कुराकानी र आपसमा संकेत गर्न पाइने छैन ।
दरखास्त फाराममा लेखिएको तह र विषयको परीक्षामा मात्र सम्मिलित भै परीक्षा दिनुपर्नेछ । विषयगत परीक्षाको लागि खण्ड अनुसार छुट्टा छुट्टै उत्तरपुस्तिकाहरु प्रयोग गर्नुपर्नेछ । एउटा खण्डको प्रश्नको उत्तर अर्को खण्डमा लेखेमा सो उ.पु. परीक्षण गरिने छैन ।
वस्तुगत परीक्षाका लागि दिइएको निर्देशन बमोजिम उत्तरपानामा मिल्ने उत्तर जनाउने बबलमा मसी भर्नुपर्नेछ । यस सम्बन्धी निर्देशनहरु राम्ररी अध्ययन गरी सोही अनुसार गर्नुपर्नेछ । अन्यथा सो उ.पु. परीक्षण गरिने छैन ।
परीक्षामा कालो मसीको मात्र प्रयोग गर्नु पर्नेछ र चित्र कोर्न बाहेक उत्तर लेख्न सिसाकलम प्रयोग गर्न पाइने छैन ।
उत्तरपुस्तिकाको नाम, थर, रोल नम्बर आदि विवरण लेख्ने कभर पेजको ठीक पछाडि कुनै उत्तर लेख्नु हुँदैन ।
आयोगले तोकेको परीक्षा केन्द्र बाहेक अन्य केन्द्रबाट परीक्षा दिन पाइने छैन ।
वस्तुगत परीक्षाको उ.पु. बुझाइसकेपछि मात्र विषयगत परीक्षाका लागि प्रश्नहरु लिई परीक्षा दिनुपर्नेछ ।
परीक्षा सुरु हुनुभन्दा ३० मिनेट अगाडि जनाउ घण्टी पछि मात्र परीक्षा भवनमा प्रवेश गर्नुपर्नेछ ।
परीक्षा सुरु भएको आधा घण्टापछि आउने परीक्षार्थीलाई परीक्षा हलमा प्रवेश गर्न दिइने छैन ।
परीक्षा सुरु भएको एक घण्टा व्यतित नभएसम्म परीक्षा भवनबाट बाहिर जान पाइने छैन ।
आफूलाई चिनाउने कुनै संकेत, फोन, मोबाइल नं आदि उत्तरपुस्तिकामा लेख्न पाइने छैन । लेखेमा परीक्षा रद्द हुनेछ ।
परीक्षा भवनमा अनुचित कार्य गरेमा प्रचलित कानून तथा शिक्षक सेवा आयोग नियमावली एवं परीक्षा एवं सिफारिस सम्बन्धी निर्देशिका अनुसार कारवाही हुनेछ ।
सरुवा रोग लागेको परीक्षार्थीले परीक्षा सुरु हुनु अगावै केन्द्राध्यक्षलाई लिखित रुपमा जानकारी दिनुपर्नेछ । केन्द्राध्यक्षले त्यस्ता परीक्षार्थीको अबस्था हेरी आवस्यक व्यवस्था गर्न सक्नेछ ।
उम्मेदवारले जुन मितिमा जुन तहको परीक्षामा सहभागी भएको हो उ.पु. मा सोही तहको रो. नं. र विषय (यदि आवस्यक भए) उल्लेख गर्नुपर्नेछ ।